Doorashada 2017 Norway Arkiver - NorSom News
Home Doorashada 2017 Norway
Norsomnews - 12. september 2017
Norsomnews - 12. september 2017 0
Madaxda xisbiyada siyaasada dalkan Norway oo ku tartamayay doorashadan ayaa midba dhankiisa sharaxaad uga bixiyay natiijada doorashada. Halkan ka daawo hadaladooda
Xisbiyada midigta oo ay hogaamineyso Erna Solberg ayaa guul lixaad leh kasoo hoyiyay doorashada, iyaga 10 kursi dheeraaday xisbiyada kale ee bidixda ee tartanka...
Norsomnews - 11. september 2017 0
158 kormeere oo isugu jiro norwiiji iyo ajnabi ah ayaa maanta kormeerayay qaabka ay u dhaceyso doorashada baarlamaanka dalkan Norway. 158-kan qof ayaa waxaa...
Wali waqti aad ku codeyso ayaad heysataa ee codee
Waxaa saacad iyo bar kadib lasoo xiri doonaa goobaha codbixinta oo caawa saacada 21:00 lasoo xiri doono. Dadka aan codeyn, ama maanta galinkii hore...
Afar saac kadib ayay soo bixi doontaa natiijada hordhaca ah ee doorashada
Waxaa maanta loo dareeray, walina socoto doorashada baarlamaanka dalkan Norway. Goobaha codbixinta ayaa albaabada loo laabi doonaa saacadu marka ay tahay 21:00, waxaana isla...
Norsomnews - 10. september 2017 0
Waxaa maalinta bari ah loo dareeri doonaan codbixinta doorashada Norway, iyada oo isla habeen danbe la ogaan doono natiijada hordhaca ah ee doorashada. Doorashadan ayaa...
(Maqaal): Solberg 2004: Waxaan ka cabsi qabaa in Trondheim ay noqoto magaalada ay soomaalidu ugu badantahay Norway
Norsomnews - 9. september 2017 0
W.Q: Yuusuf Maxamed Ibrahim. Erna Solberg 2004: Waxaan ka cabsi qabaa in Trondheim ay noqoto magaalada ugu weyn ee soomaalida ay degto. Høyre-Trondheim 2017: Soomaalidu ha...
Goobaha codbixinta hordhaca ah oo maanta xirmayo!: Ka faa´iideyso oo codee
Norsomnews - 8. september 2017 0
Waxaa maanta oo jimce oo jimce lasoo xiri doonaa goobaha codbixinta hordhaca ah ee la furay bil kahor. Qofka wali aan codeyn ee raba...
(NRK)- B. Hassan: Stemmer på et parti som godtar meg for den jeg er
Av Arne/NRK Distrikt- og skolepolitikk er viktige saker for 18 år gamle Bar Hassan fra Follebu. Men aller viktigst er det å finne ei parti...
Jonas G. Støre oo meesha ka saaray inay la shaqeeyaan xisbiga KRF!
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Ap, isla markaana ah musharaxa reysulwasaare ee xisbiyada bidixda, Jonas Gahr Støre ayaa sheegay in xisbigiisu uu ka noqday...
KRF: Ma ridi doono xukuumada Høyre iyo FRP!!
Iyada oo sadex maalin oo kali ah ay ka harsantahay maalinta loo dareerayo doorashada baarlamaanka Norway, ayaa waxaa war la yaab ah uu shaley...
Ilhaan Omar oo rabto in la ciqaabo dhaxalsugaha Sucuudiga Maxamed Bin Salman